Cotoneaster dammeri, kirihitrala mety tsara ho an'ny zaridaina | Bezzia
Bezzia | | an-trano
El Cotoneaster dammeri Is a kirihitra mandady miaraka amin'ireo rantsana malefaka an'ny fianakaviana Rosaceae. Ny anarany dia avy amin'ny latina "cotoneum"Izay midika hoe quince sy"Aster”Izay midika hoe mitovy. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny zaridaina noho ny habeny sy ny fitomboany matanjaka, indrindra amin'ny fonony.
Avy amin'ny faritra be tendrombohitra, harambato, ala mifangaro ary tany be vato avy any Chine sy Himalaya, nandritra ny taonjato maro dia niely be nanerana ny kaontinanta eropeana sy tany amin'ny faritra maro tany amin'ny Farany Atsinanana.
1 Toetra mampiavaka ny Cotoneaster dammeri
2 Fambolena sy fampielezana
3 Aretina sy katsentsitra
endri-javatra Cotoneaster dammeri
Ity dia kirihitra ambany fikojakojana izay mifanaraka amin'ny karazan-tany rehetra, na dia ireo sarotra indrindra aza. Miparitaka haingana ity karazana ity vokatry ny firafitra voajanahary mampiavaka azy.
El Cotoneaster dammeri Rantsankazo somary fohy manana savaivony malalaka; lava sy mandady ny fotony, izay mahatonga azy hamorona sosona matevina 20 ka hatramin'ny 60 santimetatra ny haavony amin'ny faritra lehibe amin'ny tany. Araka ny fantatra dia haingana ny fitomboany. Ny rantsany misy rantsana be dia manify nefa henjana ary rakotra ravina maitso maitso mifandimby. Ny raviny dia maharitra, misy ravina matevina, boribory lavalava, maintso sy maintso maintso eo amboniny ambony ary misy hazavana eo ambaniny, 2 ka hatramin'ny 3 sentimetatra ny halavany.
Ny fambolena dia mitranga amin'ny faran'ny Mey ary maharitra hatramin'ny septambra. Amin'ireo voninkazo fotsy kely voaravaka stamens volomparasy, manana felany 5 izy ireo izay mahatonga azy ireo ho voninkazo tena tsara handravahana toerana, noho ny habetsany sy fizarana manerana an'ireo sampana isan-karazany. Ho fanampin'izany, ity kirihitra ity dia mahatonga azy ho voaloto amin'ny fomba feno bibikely.
Ny voany dia boribory ary misy voa 5 ao anatinyManana loko mena midorehitra be izy ireo. Ny fahamatorany dia mitranga eo anelanelan'ny volana septambra sy oktobra, ampiasain'ny vorona mihinana azy ireo, izay mahatonga azy ireo ho singa mahaliana ho an'ny zavamananaina isan-karazany amin'ny zaridaina. Matanjaka tokoa, mahazaka mangatsiaka, fandotoan'ny tanàna ary rivotra izy. Izy io dia maniry eo amin'ny karazan-tany rehetra, fa aleony ireo somary misy asidra misy vatosokay, maina sy tsy miovaova izay mitazona ny fihavaozana sy ny harena ao anaty otrikaina ilaina amin'ny fitomboany.
Fambolena sy fampielezana
Izany dia safidy tsara hafa hahazoana karipetra amin'ny tany sarotra, noho ny zava-misy fa tsy mila fikolokoloana na fikarakarana manokana, afa-tsy ny fisorohana aretina. Mba hiantohana ny fitomboana tsara kokoa, ny fiposahan'ny masoandro na ny aloky ny ampahany dia asaina amin'ny karazana tany mikoriana tsara.
Ny fiatraikany amin'ny alokaloka dia misy fiantraikany ratsy amin'ny voninkazo sy ny ravina. Noho izany, raha ny hamorona karipetra dia ny fikasana dia ilaina ny mahatadidy fa ny alokaloka dia manimba ny zavamaniry. Ho fanampin'izay, ny toerana maresaky ny zavamaniry dia ilaina hatrany am-piandohan'ny fambolena azy, satria tsy mafy ny fakany, dia manasarotra ny famindrana azy.
Aleo mamboly manomboka oktobra ka hatramin'ny aprily, zavamaniry iray monja amin'ny vilany iray, satria tsy dia misy ny fotony. ny Cotoneaster dammeri Ny fangatahana fanondrahana mandritra ny vanim-potoana fahavaratra dia handrisihana ny fitomboan'ny fakany mba hahafahany mivoatra tsara. Ny sampany midadasika dia azo miorim-paka amin'ny zavatra iray handrakofana ny rindrina.
Ilaina ny mitazona ny elanelana manodidina ny 60 na 100 santimetatra eo anelanelany. Eny OK zavamaniry maharitra tsara izy ioTsy mahazaka ny haintany lava ary indrindra mandritra ny vanim-potoana fitomboany. Mba hisorohana ny fahaverezan'ny zavamaniry eo am-potony vokatry ny fitomboany amin'ny sisiny dia tsara ny fanetezana antonony isan-taona. Matetika ny fanetezana ireo kirihitra ireo dia entina hanatrarana ny simetrany, noho izany dia ilaina ny manala ireo sampana be loatra sy ireo maty. Ny fanetezam-boaloboka dia tokony hatao amin'ny fiandohan'ny lohataona mba hampirisihana ny fitomboan'ny rantsana vaovao, ary ity kirihitra ity dia mitaky zezika mba hampitomboana ny fahafahany, indrindra mandritra ny lohataona sy ny fahavaratra.
Manoro hevitra ireo manampahaizana manokana asio zezika misy peat sy zezika, manamboatra lamba firakotra amin'ny tany manodidina ny 8 sentimetatra. Ho an'ny fitomboan'ny kirihitra tsara kokoa, azo atao ny mampiasa zezika granular mamoaka moramora misy potasioma sy posiporosy. Izy io dia mampiavaka ny zavamaniry rehefa tapitra ny vanim-potoana fivelarana dia mahazo fahaleovan-tena tena tsara momba ny rano izy.
Aretina sy katsentsitra
Rehefa tsikaritra ny fisian'ny teboka volontsôkôlà eo amin'ny ravin'ity kirihitrala ity, dia mety ho famantarana izany fa notafihan'ny mealybugs, izay mety ho menaaly mealybug. Izy ireo dia azo esorina amin'ny tanana na amin'ny alàlan'ny fampiasana fanafody famonoana pestisida manokana misy amin'ny magazay manokana.
Ny bakteria no mamokatra azy Erwinia amylovora. Momba izany aretina mamindra izay miely mora foana eo anelanelan'ny zavamaniry. Hatramin'izao dia tsy fantatra ny fomba fanasitranana ilay zavamaniry aretina toy izany, ka tsy misy sisa tavela fa ny manapaka ireo faritra voan'ny otrika kely dia nanafika ny fanafihana ny bakteria ary nandoro azy ireo mba hisorohana ny mety fiparitahany.
matetika, miparitaka avy any amin'ny tapany ambony amin'ireo rantsana ny aretina ary aharihary amin'ireny sampana tanora ireny amin'ny toetr'andro mahasoa amin'ny fisehoany, indrindra amin'ny volana Mey ka hatramin'ny Septambra. Tokony hampiharina ihany koa ny fepetra prophylactic matanjaka toy ny famonoana otrikaina fitaovana ampiasaina amin'ny fanetezana zavamaniry marary. Ny fambara an'ity aretina mahatsiravina ity dia; fisehoan'ny teboka mena eo amin'ny ravina izay mivadika loko volontany avy eo, avy eo maka loko mavo ny ravina ary milatsaka ihany.
Aphids dia afaka manafika ilay zavamaniry ihany koa bibikely fotsy sy mavo izay mamelona ny ravina. Azon'izy ireo atao koa ny miady amin'ny fampiasana fanafody famonoana otrikaina manokana. Ao amin'ny akanin-jaza ny karazana dia mety hijaly ny fanafihana afero ampitain'ny Agrobacterium tumyfaciens. Tokony ho mailo amin'ny zavatra azo atao isika fisehoan'ireo fivontosana kely amin'ny fotony sy ny faka. Izy io koa dia mora voatafika noho ny antsoina hoe sompitra maloto.
Matetika izy io no ampiasaina any an-jaridaina mamorona fefy miloko misy endrika samihafa, mampifanaraka tsara an'io tanjona io ny fandaminana azy, manome zaridaina kanto sy tombam-bidy indrindra amin'ny zaridaina sy ny villa. Ankoatry ny maha-zavamaniry tena tsara azy amin'ny fanomanana karipetra legioma na dia any amin'ny tany sarotra indrindra aza, ny rafitry ny fotony lalina dia mahatonga azy io ho mpampiorina tsara ny tehezan-tendrombohitra sy ny tevana.
Su mamony mamokatra be tantely, manintona azy amin'ny bibikely, lolo sy tantely mandoto. Ny voankazo izay manaraka ny voninkazo amin'ny voalohan'ny volana septambra dia fihinan'ny vorona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Cotoneaster dammeri, kirihitrala mety tsara ho an'ny zaridaina
Hydration sy hetaheta: mitazona rano amin'ny fihainoana ny vatantsika
Maso Foxy: ny fironana makiazy manala ny malaza